Apple dia namoaka Beta faharoa an'ny macOS 12.2 ho an'ny Developers | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka beta faharoa an'ny macOS 12.2 ho an'ny mpamorona
Efa manana kinova vaovao an'ny macOS Monterey ny mpamorona manangana fampiharana ho an'ny Apple. dia momba ny ny beta faharoa an'ny macOS 12.2, izay vao navoakan'ny orinasa ho an'ireo programmer rehetra maniry izany.
Toy ny mahazatra amin'ny dikan-teny beta rehetra an'ny macOS, ireo mpamorona Apple nahazo alalana dia afaka misintona azy mivantana avy amin'ny tranokalan'ny mpamorona Apple na amin'ny alàlan'ny OTA raha toa ka efa manana dikan-teny beta an'ny macOS Monterey napetraka amin'ny Mac izy ireo. miandry.
Telo herinandro lasa izay, Apple dia namoaka ny beta voalohany an'ny macOS 12.2 ary ora vitsy lasa izay dia namoaka ny beta faharoa. Ity version of macOS Monterey manampy fampiharana mozika vaovao sy fanatsarana ny Safari amin'ny fampisehoana ProMotion toa ny MacBook Pro.
Ity beta vaovao ity dia manana ny isan'ny manorina 21D5039d. Efa azo alaina ao amin'ny tranonkala avy amin'ny Apple ho an'ny mpamorona. Azo alaina amin'ny alàlan'ny OTA ihany koa izany, raha toa ka efa manana beta an'ny macOS Monterey ny Mac developer.
Efa ao amin'ny beta voalohany an'ny macOS 12.2 vaovao azo jerena. Mampiditra fampiharana teratany vaovao ho an'ny Apple Music, haingana sy malama kokoa noho ny dikan-teny teo aloha, izay mitovitovy amin'ny pejin-tranonkala.
Ny zava-baovao hafa hitanay tamin'ny macOS 12.2 beta 1 dia fanatsarana lehibe amin'ny horonan-tsary amin'ny Safari miaraka amin'ny efijery. Promotion, toy ny MacBook Pro.
Ny tena lojika dia ity beta vaovao faharoa ity dia natao hanitsiana ny lesoka hita tamin'ny voalohany, ary tsy manome vaovao manan-danja ho an'ny mpampiasa.
Toy ny ataonay foana avy eto dia manoro izany izahay aza mametraka version beta an'ny macOS amin'ny Mac-nao, na ampiasainao any am-piasana na any am-pianarana. Ny mpamorona dia manana Mac manokana hanaovana fitsapana toy izany, izay tsy misy angona mitsikera. Raha noho ny hadisoana sasany ao amin'ny beta ny fitaovana dia mianjera, averin'izy ireo izany ary atombony, tsy misy olana. Misy loza ateraky ny asa. Raha mitranga aminao izany, eny, manana olana ianao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Apple dia namoaka beta faharoa an'ny macOS 12.2 ho an'ny mpamorona
Apple dia nifampiraharaha tamin'ny 2020 tamin'ny mpanamboatra kojakoja fiara japoney
Podcast 13 × 16: Inona no antenainay amin'ny Apple amin'ny 2022